OEM / ODM - Guangzhou Yun Yang okuzora Co., Ltd.
kwenyu chigadzirwa kusarudzwa
Kusarudza zvigadzirwa nokuda kwenyu skincare mutsetse aigona kuva makura muitiro, asi ruzivo rokutengesa dzedu neshamwari dziri nounyanzvi kuti ikutungamirire kuburikidza muitiro nyore. Vanodzidziswa kubvunza mibvunzo zvakanaka, vachibvumira kuti uvake yako chigadzirwa pazviridzwa effortlessly uye nounyanzvi; apo vachiziva kuriritira clientele.You wako ichaongorora mutsetse yedu yose yepamusoro Formulations, achisarudza zvinhu zvenyu uye achirayira ivhu apo zvakakodzera kuti kuongorora zvinhu zvenyu pamberi vakasarudzwa. Uye, hapana mhosva nokuda kwenyu chigadzirwa kubvunza.
Kunonga Packaging Your
Kamwe kwenyu chigadzirwa pazviridzwa vasarudzwa, nhoroondo yako Executive ichakubatsirai yedu kavha sarudzo. apo zvingaratidza rakakura, tichaita kuti nyore kwauri. Mushure mibvunzo mashomanana anokosha nezvezvaakaona uye bhajeti yenyu, rokutengesa yenyu shamwaridzana ichakubatsira kusarudza zvakawanda chigadzirwa kavha nzira kuumba cohesive, pamusoro-muchiso ngaaone.
Kutanga Your Brand Identity
Zvino skincare private chitaridzi zvigadzirwa zvako vanosarudzwa uye kavha wako akasarudzwa, iwe kuchaita kuti kukurukura muchiso wako. Zvakakosha kuti iwe unzwisise WHO zvauri kutengesa kuti, uyewo WHO uri kambani, kusika munhu akatarira kuti resonates nemi uye dzenyu vatengi.
Afunge Packaging Your
chete branding wako hwakagadzwa, uye zvinhu zvako uye chiputiriso vakasanangurwa, ticharamba anozodzidza mazano kavha wako. Pana YunYang zvizorwa, izvi zvikuru kupfuura achiwedzera Logo kuti humwe chitaridzi, ichi chinhu chakagadzirwa muitiro kushandura BRAND kwako zviende yenyu skincare zvigadzirwa.
Patani Chikwata yedu kuchaita kugadzira imwe shanduro zvisiri zvako kuti pakombiyuta mudzokorore uye zvinopa dzinovaka. Rokusika Our streamlined muitiro ndiye zvose inoshanda uye basa, achivimbisa imi uchitsanya zvichachinja nguva zvinobvira.
Kushambadzira & kutengesa Product Your
rubatsiro wedu asingadi kuguma nokuti magamuchira itsva private chitaridzi skincare mutsetse yenyu. Chikwata chedu nenyanzvi vakadzidza acharamba kukupa ruzivo uye kutungamirirwa unofanira zvinobudirira kutengesa uye kutengesa zvigadzirwa zvako. Kubva yedu paIndaneti chirungiso Database, kuti atinoita-nomudonzvo skincare nenyanzvi, isu achakupa mashoko unofanira kubudirira mune skincare pamusika.
Kuti uwane mamwe mashoko pamusoro Private Label uye sei kutanga, nesu uye nhoroondo mumiririri yako itsva zvichafara kukubatsira.
YunYang zvizorwa acharamba kukupa yepamusoro, vanachiremba giredhi skincare zvinhu nokuda private chitaridzi. Pashure pemakore anopfuura 15 ari nyanzvi skincare indasitiri, zvigadzirwa edu kunge wakashanduka-shanduka kubva makore tsvakurudzo, yokuedzwa uye dzinovaka.
Mumazana izvi okupedzisira maviri emakore, zvatakaziva kuti chinonyanya kukosha chikamu private chitaridzi kwacho kuri nechokwadi kuti tinonzwisisa iwe, rako muchiso, uye zvinangwa zvako - chaizvoizvo, chiratidzo chako. Ndokusaka redu zvikuru vakadzidziswa rokutengesa nyanzvi kushanda nemi kukutungamirira kubudikidza private chitaridzi muitiro; mibvunzo zvakanaka kubatsira kuveza wakakwana chigadzirwa mutsetse kuti vatengi zvenyu.
Pana YunYang zvizorwa, kunangisa kwedu kuri kubudirira kwenyu skincare mutsetse, uye tinosungirwa kwazvo zvaunotarisira danho ose munzira.
Quick Product Dzokerai Around Times
Ruzivo Skincare Nyanzvi
In-imba Graphic Designer Team
Professional kavha rutsigiro
chiso Mask , Face Mask Sheet , chiso Mask Sheet , zviitwe Serum, Matcha Mud Mask , Sheet Mask ,